Extra-pahupamhi Extrusion unhani & Lamination Machine - China Qingdao Shicheng Plastic
epurasitiki bhodhi uye jira ...
bemhapemha & lamination ...
Extra-pahupamhi Extrusion unhani & Lamination Machine
Classicx Series Extra-pahupamhi Extrusion unhani uye Laminating Line ari customized, mukuru kugadzirwa pakati uye mhoro-kuguma muchina akasika FEEC. Mumuchina chakagadzirirwa uye akatsvaga ne michina yemhando yepamusoro, uchishandisa Pe / PP sezvo mbishi zvinhu kuti zvemapuranga laminated pamwe epurasitiki rakarukwa jira. Zviri midziyo mukuru-waivako hwokubereka yokuwedzera-rakapamhama jira zvigadzirwa. Mafomu: Vakawanda kushandiswa kugadzira yokuwedzera wide mapurasitiki rakarukwa Micheka akadai sunshade machira, nematende, mvura-uchapupu machira, Geo ...
Classicx Series Extra-pahupamhi Extrusion unhani uye Laminating Line ari customized, mukuru kugadzirwa pakati uye mhoro-kuguma muchina akasika FEEC. Mumuchina chakagadzirirwa uye akatsvaga ne michina yemhando yepamusoro, uchishandisa Pe / PP sezvo mbishi zvinhu kuti zvemapuranga laminated pamwe epurasitiki rakarukwa jira. Zviri midziyo mukuru-waivako hwokubereka yokuwedzera-rakapamhama jira zvigadzirwa.
Rinoshandiswa nevakawanda hwokubereka yokuwedzera wide mapurasitiki rakarukwa Micheka akadai sunshade machira, nematende, mvura-uchapupu machira, geotextiles, rinorema-basa kavha jira, flex mureza, etc. Maximum upamhi inogona kusvika 6200mm.
Usazviomesera customization anogona kusangana zvinorayirwa akasiyana vatengi.
The muchina adopts panhongonya-mhando extruder, uye anogona kushandisa zvivako zvakasiyana maererano chigadzirwa zvadzinoda.
Two extruder uye kweva ikafa unogona kuzadzisa kaviri divi laminating mumwe muitiro;
Inogona vakagadzirira vakavirikidza-divi squeezer uye Dryer sezvo sarudzo kubudisa mvura-ndege kamuri jira zvigadzirwa.
Corona treater uye zvokudhinda chikwata ndivo nzira nokuda chigadzirwa vanoda zvokudhinda vanozivikanwa uye muenzaniso pashure laminating
The lamination Chikamu inogona vakagadzirira vatatu chinotenderera Calendar, zvakakodzera kugadzira Rakapamhamha machira pamwe Max. Ukobvu kuti 3mm;
Laminating nokukurumidza inogona kusvika 150m / Maminitsi maererano mutengi zvinodiwa.
chikwata SJ120 / FMS3200 SJ150 / FMS4200 SJ180 / FMS4500 SJ200 / FMS6200
Lamination ukobvu neIkoniyumu 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10
Mechanical Line Speed m / Maminitsi 20-200 20-200 20-150 20-200
Screw dhayamita, L / D mm Φ120 × 33 Φ150 × 33 Φ180 × 33 Φ200 × 33
Max.Unwind / Washington mupumburu dhayamita mm 1200 1200 1200 1200
Power Total KW 210 350 400 420
Air kunwa M 3/ Maminitsi 0,8 1.0 1.2 1.2
kutonhora Water M 3/ Maminitsi 0,8 1.0 1.2 1.2
Total Weight tani 34 46 55 65
Line Size (L × W × H) M 12 × 18 × 4.5 14 × 20 × 4,7 14 × 22 × 5 15 × 23 × 5
Previous: Extrusion bemhapemha & Lamination Machine
Next: Four ruvara wokudhinda
Bemhapemha And Lamination Extrusion Line
Bemhapemha And Lamination Line
Bemhapemha And Lamination Lines
Bemhapemha And Lamination Machine
Bemhapemha And Lamination Machinery
Bemhapemha And Lamination Production Line
Extra-Width Extrusion unhani And Lamination Extrusion Line
Extra-Width Extrusion unhani And Lamination Line
Extra-Width Extrusion unhani And Lamination Lines
Extra-Width Extrusion unhani And Lamination Machine
Extra-Width Extrusion unhani And Lamination Machinery
Extra-Width Extrusion unhani And Lamination Production Line
Extrusion bemhapemha And Lamination Extrusion Line
Extrusion bemhapemha And Lamination Line
Extrusion bemhapemha And Lamination Lines
Extrusion bemhapemha And Lamination Machine
Extrusion bemhapemha And Lamination Machinery
Extrusion bemhapemha And Lamination Production Line
Four ruvara wokudhinda
Extrusion bemhapemha & Lamination Machine